Mufashoni Pocket Makeup Magirazi
Uri kutsvaga chimwe chinhu chekusimudzira kana zvimwe zvakanaka zvipo zvevasikana kana vakadzi? Imwe yezvipo zvedu zvakanaka - fashoni acrylic & simbi yekugadzira magirazi ingave iri sarudzo yakanaka kwauri. Iyo inoyevedza uye inoyevedza girazi girazi inogona kugadzirwa nezvinhu zvakasiyana zvinosanganisira iron, zinc al ...
Iwe unofarira mitambo yekunze here? Uri kunetseka here nezvekushaya nzvimbo yekuchengetera nharembozha yako kana zvakakosha uchirovedza muviri? Yedu fashoni yemitambo armbands & muchiuno bhegi inonyatso kugadzirisa ako mapuzzle, uye usambove neruzivo rwekusaziva kwekuisa yako nhare kana imwe yemunhu ive ...